ULUHLU OLUTSHA 'LWEENTLOKO ZABANTWANA' EZIVELA KUROBERT RODRIGUEZ? - IROBERT RODRIGUEZ
Igama Loqhagamshelwano Patinkin
Amaxesha Amatsha Eyork
Izinto Esizibonileyo Namhlanje: Uluhlu olutsha lweNtloko yaBantwana oluvela kuRobert Rodriguez!?
Okokugqibela, ixesha lam lifikile: Inokuba sicinga kwakhona Ukuhlola abantwana uthotho oluvela kuRobert Rodriguez. Ifilimu yokuqala yaphuma ngo-2001 kwaye yasungula indalo enkulu, kubandakanya Imachete nangaphezulu kuRodriguez. Ke kutheni uyibuyisa ngoku? Kuba Ukuhlola abantwana Imithetho kwaye ihlala ikhona, kwaye ndicinga ukuba ndiya kuhlala ndiyiloo ntwana ifuna ukuhlala eJuni nakwindlu ekhuselekileyo kaCarmen Cortez.
Ngoku ka Umhla wokugqibela , I-SkyDance Media ijonge ukuyivula kwakhona i-franchise noRobert Rodriguez, kwaye andifuni ukuthi ndinomnwe wam kubetha, kodwa NDANDICELA uRobert Rodriguez ukuba andinike entsha Ukuhlola abantwana uthotho lweenkwenkwezi uPedro Pascal njengendima yeAlexander Banderas ngenxa Singaba ngamagorha.
ukuzama nzima ngenene ukwenza ukuba i-pedro pascal spy abantwana iqalise kwakhona @NtsikeleloCanga pic.twitter.com/muLQnacQjw
- rachel leishman (@RachelLeishman) UDisemba 28, 2020
Yintoni emnandi ngolu luhlu kukuba ibeka isenzo kunye nokuzonwabisa kubantwana, kufana Singaba ngamagorha . Uninzi lwexesha, siyazibona ezi bhanyabhanya zenzelwe abantwana kodwa abantu abadala ngabo abenza zonke izinto ezonwabisayo, kwaye kwakungazange kube njalo kwihlabathi uRodriguez awayelwakha. Abantu abadala baya kuba nexesha labo (kwakhona, umlinganiswa kaDanny Trejo uMachete uvela kwi Ukuhlola abantwana iphela).
Ukubuyisa elo hlabathi nangasiphi na isikhundla kuyandisebenzela. Mhlawumbi ingandinika enye ingoma ukuba ndiyicule entlokweni yam nangawuphi na umzuzu.
Ngokufana ... ezi bhanyabhanya ziyonwabisa. Ndikhumbula ndibathanda ndisengumntwana kwaye nangoku ndicinga ngabo ngothando kuba bendithanda umbono wokuba thina (sithetha abantwana) singaba ziintlola kumdlalo bhanyabhanya okanye sibe ngamagorha, kwaye yayingelilo nje iqela labantu abadala elikhokelayo ityala. Ke ukunika le nto kwisizukulwana esitsha sabantwana? Ndilapha ngenxa yayo.
Ngayo yonke loo nto ithethwayo: NDENZE KAKHULU ABANTWANA BOKUHLOLA !
ukwenziwa kwesame yesitalato
(umfanekiso: Iingxaki zeStudios)
Nanga amanye amabali esiwabone phaya ngaphandle namhlanje!
Imidlalo yehoki ithe cwaka… ithule kakhulu pic.twitter.com/JVa1QtyJug
-Gritty (@GrittyNHL) NgoJanuwari 26, 2021
Iintetho zikaEmma Caulfield Ford Umbono weWandaVision , Iimfihlakalo ezimangalisayo, kunye nokunye! (nge Iklabhu yeAV )
UWerner Herzog kumculo abemisela ividiyo ye-skate: pic.twitter.com/fd1MaQdWnQ
-Ndidiniwe kwaye ndikwi-intanethi (@food_enjoyer) NgoJanuwari 25, 2021
Ukufunga ngumqondiso wobukrelekrele, eneneni. Kufuneka ndithethe ukuba ndinengqondo ngokwenene. (nge CNN )
lo ngumzimba wesilisa ofanelekileyo. awungekhe uyithande kodwa le yindlela intsebenzo yencopho ebonakala ngayo pic.twitter.com/xsg8D7cJgt
-Sara david (@SaraQDavid) NgoJanuwari 25, 2021
Ngaba ikhona into esiyiphosileyo? Sazise ngento oyibonileyo kwezimvo zingezantsi!
ibonisa ngokufana nenkedama emnyama
yintoni disney princess ine tattoo
j jonah jameson alex jones
Ngomgqibelo ebusuku phila ukucula